भारतीले आफैले गरिन यस्तो खुलासा भन्छिन: बषौ देखि विछोड भएकी आफ्नो छोरी भेटे ! ‘करियरका कारण जन्माएर अरुलाई दिएका थियौं’(भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
भारतीले आफैले गरिन यस्तो खुलासा भन्छिन: बषौ देखि विछोड भएकी आफ्नो छोरी भेटे ! ‘करियरका कारण जन्माएर अरुलाई दिएका थियौं’(भिडियो हेर्नुस्)
May 21, 2021 724
एजेन्सी । हास्य कलाकार भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचियाकी छोरी हुन् यिनी । भारतीले छोरीलाई आफ्नो क्यारियरको शुरुमा जन्म दिएकी थिइन् । तर करियर बनाउनका लागि उनले छोरी अरु कसैलाई दिएकी थिइन् ।
अब उनको करियर बनिसकेको छ त्यसैले उनी आफ्नो छोरी फिर्ता लिन चाहन्छिन् । यो हामीले भनेको होइन, यो कुरा भारती आफै भिडियोमा भनिरहेकी छन् ।
तपाईंले गलत सोच्नु अघि हामी नै प्रष्ट पारिदिन्छौं की यो सबै कुराहरु भारतीले एक निकै प्यारी छोरीलाई देखेर भनेकी हुन् । उनले यस्तो भनेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । जहाँ भारती र उनका पति पनि छन् ।
बालिकालाई देखेर भारतीका श्रीमानले भारतीलाई बोलाएर भन्छन् की भारती तिमी यिनलाई साँचो कुरा भनिदेउ त । अनि भारतीले ति बालिकालाई काखमा लिएर यो सब भनेकी हुन् । यो रमाईलो भिडियोमा हर्ष र भारती नृत्य दीवाने प्रतियोगी गुंजनलाई भनेका हुन् । उनीहरुले गुंजनलाई जिस्क्याइरहेका छन् । यो भिडियो धेरै हास्यास्पद छ।
भिडियोमा प्यारा सी गुंजन देखिएकी छन्। हर्षले उनलाई के गरेको भनेर सोध्छन् , त्यसैले उनी उत्तर दिन्छिन्, ुस्ट्रेचिंगु। यस पछि हर्षले भारतीलाई गुञ्जनलाई सत्य बताउन भन्छन्। भारती भन्छिन् कि गुंजन हाम्रो छोरी हुन्।
यो हाम्रो क्यारियर शुरू भएको थियो त्यती बेला जन्म भएको थियो, त्यसैले हामीले यिनी उनको आमालाई दियौं । हामी क्यारियरमा ध्यान दिन चाहन्थ्यौं। हाम्रो क्यारियर बनेको छैन तर हामी छोरीलाई फिर्ता लिन चाहन्छौं।
दुलहा र दुलही बिहे गर्दा गर्दै पछाडि बाट आवाज आयो, केटी धेरै रात मा संग बसेको छ भनेपछि…